Saacid oo la sheegay in Ra'iisul Wasaare loo magacaabayo. - Caasimada Online
Home Warar Saacid oo la sheegay in Ra’iisul Wasaare loo magacaabayo.
Saacid oo la sheegay in Ra’iisul Wasaare loo magacaabayo.
Haddii aysan saacadaha soo socda wax is beddelin, Madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud, ayaa u xushey in uu la shaqeeyo, oo uu raysal wasaarena u magacaabo Md. Cabdulqaadir Faarax Shirdoon (Saacid) oo ah ganacsade deganaa muddo dalka Kenya.
Saacid, ayaa la rajeynaaya in ugu dambeyn si toos ah loogu dhawaaaqo in uu yahay raysal wasaaraha Soomaaliya ee afarta sano soo socota 24 saac gudahood.
Dr. Cabdulqaadir Faarax Shirdoon (Saacid) waxa uu ka soo haray toban ruux, oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, uu ka soo xushey ku dhawaad 50 musharax, sii uu ugu kala saaro, cidda uu xilkan ku aaminaayo. Waxana maanta Saacid iyo musharax kale isku soo harey wareeggii ugu dambeeyay ay nasiibkiisa noqotey Saacid, in uu xilkan muteysto.
Warkan, ayaa waxaa inoo sheegay ilo kalsoon yahay,
Warku waxa uu intaas ku daraya in arrinatn ay ka dambeysay ka dib wada tashiyo dhowr ah oo uu Xasan Sheekh Maxamuud la yeeshay qeybaha bulshada iyo musharixiintii u taagnaa xilka.
Maxamed C/laahi Farmaajo, oo xilkan si aad ah dadkii loogu badinaayay ka mid ahaa, ayaa sidoo kale mar haddii u cadaadis badan la kulmey, si kal iyo laab ah u tageeray Dr. Saacid in uu xilkan qabto.
Dr. Saacid, waxa uu ahaaa xisbiga Rajo, waxana sidoo kale la sheega in uu ka mid ahaa mar aas’aasayaashii xisbiga horrumarka iyo nabadda ee PDP ee uu Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha dalka uu hoggaamiyo.
Farmaajo iyo Saacid, oo ah laba ruux oo hal jufo ka soo jeeda, ayay sidoo kale dad badan sheegayan in haddii uu Farmajo meesha waayay dadkii isaga taageerayay suura gal tahay inay ayidaan Saacid, si uu isna howshan ugu guuleysto.
Dr. Saacid, waxaa u dhaxda xildhibaanadda caanka ah ee Caasho Xaaji Cilmi, oo ka mid ah mudanayasha barlamaanka kuwooda ugu magac dheer dhinaca caalamka marka la eego.